Aftermath မောင်တောမုန်တိုင်းအလွန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Aftermath မောင်တောမုန်တိုင်းအလွန်
Posted by padonmar on Jun 10, 2012 in Creative Writing, Critic | 20 comments
ဘယ်နေရာက ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်နဲ့ဘဲစခဲ့စခဲ့
မောင်တောမြို့မှာတော့ ကြေကွဲဖွယ် မုန်တိုင်းတစ်ခုကျသွားခဲ့သလိုပါဘဲ။
သူ့ကြောင့်ငါ့ကြောင့်လို့ အကြောင်ရင်းကိုဖွေရှာတာကတော့ တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ပါ။
ကျမတို့တွေ ဒီမုန်တိုင်းလေး စဲစအပြုမှာ ရှေ့ဆက်ရမယ့် ခရီးစဉ်လေးတွေ ဆွဲကြည့်ကြရအောင်ပါ။
(၁)မောင်တောဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ရံပုံငွေ
ကျမတို့ MG ရွာသားတွေကတော့ ရခိုင်သွေးချင်းများအတွက် ကူညီရန် ရံပုံငွေ စစုနေကြပါပြီ။
သွေးမကွဲကြောင်းပြတဲ့ အနေနဲ့ ရွာထဲက မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေလည်း နည်းများမဆို ငွေအား၊
ထို့အတူ မြန်မာပြည်အနှံ့က မြန်မာမွတ်ဆလင်များကလည်း စိတ်ပါလက်ပါကူညီရင်း
ကလေးငယ်တွေပညာရေးအထိ လိုအပ်နေမယ့် ကူညီသွားရမယ့် နေရာတွေ အများကြီးနေမှာပါ။
ဒီရက်ထဲ သဂျီး မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေတာ ကြည့်ပြီး သနားပါတယ်။
လုပ်ငန်းသဘာဝတွေ နားမလည်ပေမယ့် Moderator တစ်ယောက်
(proposal ကတော့ အရီးလတ်ပါ)လောက် ရှိရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ထဲက လုပ်နိုင်မယ့်သူရှိရင်လည်း ကောင်းတာပါဘဲ။
၁၉၈၈မှစပြီး နောက်ပိုင်း ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး အပြီးမှာ
ပြည်သူနဲ့ တပ်မတော်ကြား အမုန်းတရားတွေ သိမ်းပိုက်ထားကြပါတယ်။
အစိုးရသစ်တက်ပြီး မကြာသေးမီက (သုံးခွလို့ထင်ပါတယ်)သောက်ရေကန်တူးရာမှာ
ကူညီခဲ့တဲ့ တပ်မတော်သားများကို မီဒီယာတွေက တဆင့် အသိအမှတ်ပြုပေးလာကြပါတယ်။
(နေရာလေး မေ့နေလို့ ခွင့်လွှတ်ပါ)
ယခု မောင်တောအရေးမှာ ဒီကိစ္စကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနိုင်ဖို့
စစ်တပ်ဘာလုပ်နေတာလဲကွ ၊လူလိုရင် ငါတို့ပါ စစ်ထဲဝင်မယ် ဆိုတဲ့ ဆဲသံလေးတွေဟာ
တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပေးလိုက်သလိုပါဘဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွက် စစ်တပ်ဟာ အလွန်အရေးပါကြောင်း မျက်ဝါးထင်ထင်သိလိုက်ရပါတယ်
လက်နက်အင်အားနဲ့မှ ထိန်းသိမ်းလို့ရမယ့် ရန်သူကိုဖြိုခွဲရာမှာ စစ်တပ်မှ အထိရောက်ဆုံးနှိမ်နှင်းနိုင်မှာပါ။
ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေး၊
အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တန့်ခိုင်မြဲရေး ဆိုတဲ့ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးဆိုတာ ဒီလိုနေရာမှာ ထုတ်သုံးရမှာပါ။
တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို
ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဟာလည်း တပ်မတော်ရဲ့ တာဝန်ထဲက တစ်ခုပါဘဲ။
အားလုံးက တပ်မတော်ကို ဒီနေရာမှာ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ပေးစေချင်ကြသလိုဘဲ
တပ်မတော်ကလည်း ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြီး နယ်မြေလုံခြုံရေး တာဝန်ယူပေးနေတယ်ဆိုတာ
အစိုးရသည် ဤအရေးကို သမ္မတကိုယ်တိုင် အနီးကပ်ကြီးကြပ်ကိုင်တွယ်၏ ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ချက်များ ဆောင်ရွက်၏ ဒုသမ္မတအပါအ၀င် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် အခင်းဖြစ်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြ၏ ၊ ဒုက္ခရောက်နေသူတို့ကို လေယာဉ်ရဟတ်ယာဉ်များသုံးကာ နေရေးစားရေး ကျန်းမာရေး လတ်တလောဆောင်ရွက်နေ၏ ၊ ကြည်း၊ရေ၊ လေ တပ်မတော်သားများ ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လည်းတက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ကြ၏ ၊တာဝန်ကျေကြ၏ ။
တပ်မတော်သားတွေအနေနဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေမှာပါ
အချိန်ယူပြီး စိတ်ပါလက်ပါ ကူညီကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်တွေ
ဒီအချိန်ဟာ တပ်မတော်ရဲ့ Image ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်ကောင်း၊ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့
၀င်ရောက် နှောက်ယှက်သွားတာ တော်တော် အရုပ်ဆိုးပါတယ်။
ဒီအချက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချသင့်ပါတယ်။
သာမာန်ပြည်သူနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆိုတာ တောင်ဝှေးနဲ့ ဖိုးသူတော်ပါ။
တောင်ဝှေးလဲရင် ဖိုးသူတော်ထူနိုင်ပေမယ့် ဖိုးသူတော်လဲရင် တောင်ဝှေးမထူနိုင်ပါဘူး။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ ကြက်ခြေနီဆိုတာ စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာတောင် မပစ်ခတ်ရမယ့်ထဲပါပါတယ်။
ဒီအတွက် နယ်စပ်လိုဒေသတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုတာကို နောင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးကြစေချင်ပါတယ်။
(၅)ပေါ့ပေါ့မတွေးသင့်တဲ့ အယ်ကိုင်ဒါတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု
အယ်ကိုင်ဒါတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုဟာ အခြေအမြစ်မရှိ ကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုပေမယ့်
သူတို့လို အသေခံဗုံးခွဲရဲအောင် ဦးနှောက်မှိုင်းတိုက်ခံထားရတဲ့ မိုက်ရူးရဲတွေရဲ့ ရန်ကိုတော့
ကျမတို့ body search အရှာဖွေခံရပြီးမှ ဘုရားဖူးချင်လည်းဖူးရပါစေ။
ကျမတို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ် ရွှေတိဂုံစေတီကြီးကိုလည်း သွေးမစွန်းစေချင်ပါ။
သူတို့ရဲ့ ဗလီတွေကိုလည်း မထိပါးကြစေချင်ပါဘူး။
ဒါဟာကြောက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။အကျိုးမဲ့လုပ်ရပ်တွေ မလုပ်ကြစေချင်တာပါ။
ခေါင်းထဲပေါ်လာ သလောက်လေးတွေ ရေးကြည့်တာပါ။လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်စွက်ဝေဖန်ကြပါအုံး။
ဟုတ်တယ် အစ်မကြီးရေ…ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေက ဦးနှောက်မှိုင်းတိုက်ခံထားရတာဆိုတော့ ဘာမှအရှည်ကြီးစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အစ်မကြီးပြောသွားတာတွေက တကယ်ကိုတွေးတော၊ စဉ်းစား၊ ဆောင်ရွက်ရမဲ့အရာတွေပါ။
ဒေါ်ဒေါ်ရေ မျက်လုံးတလုံး ဆုံးရင် မျက်လုံး တလုံးကို ပြန်လျော်ခိုင်းတယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်က နောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာလောကကြီး တခုလုံးကို အကန်းတွေအပြည့်နဲ့ပဲ ထားခဲ့မယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ရင် ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်နေပါပြီ။
သို့သော် ကန်းသူတွေက တကယ့်အစွန်းရောက်တွေ ဆိုရင်တော့ အသေခံပြီး ရန်ရှာမဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ဆဆနေလို့ မရတော့ပါဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက် ကာကွယ်ရေး ၊ လုံခြုံရေးကို ခဏတဖြုတ်မဟုတ်ပဲ သင့်တော်ရာ ရာသက်ပန် အဖွဲ့အစည်းသဘောမျိုးတောင် ထားသင့်ပါပြီ။ ဘယ်လိုမှ လျော့တွက်လို မရတဲ့ နယ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဆိုင်ရာများ အမြင်ရှိရှိနဲ့ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါစေပဲ မျှော်လင့်ရတော့မှာပါ။
ပြည်သူ့ အစိုးရ၊ ပြည်သူ့တပ်မတော်၊ ပြည်သူ့ရဲ အားလုံး ကိုပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မျက်လုံးတလုံး ဆုံးရင် မျက်လုံး တလုံးကို ပြန်လျော်ခိုင်းတယ် ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်က နောက်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာလောကကြီး တခုလုံးကို အကန်းတွေအပြည့်နဲ့ပဲ ထားခဲ့မယ်
မြန်မာပြည်မှာနေ မြန်မာပြည်မှာကြီး မြန်မာပြည်ကြီးကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေလည်း
မွတ်ဆလင်ဘာသာwebsite တွေမှာ ရေးထားပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဆွေးနွေးကြမလဲ ဘုန်ကြီးကျောင်းမှာလဲဘုန်းကြီးဟောရင် ပါဌိတွေနဲ့
NO GOD BUT ALLH ဆိုကထဲကသွားရော
Aunty Padonmar ရဲ့အကြံပြုချက်အား အတိုင်းအထက်အလွန် ထောက်ခံ အားပေးပါအိ။ ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းသည် အထိရောက်ဆုံး
ဆရာဝန်ပီပီ ဖြစ်မှကုလိုက်တာထက် ကြိုတင်ကာကွယ် ဖို့ကို တွန်းအားပေးထား တဲ့ Post လေးပါဘဲ။
အစ်မ ပြောတာ တွေ အားလုံး က ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ သတိတရား ဆိုတာ ပိုတယ်မရှိ ပါဘူး။
ထပ်ဝင်ဖြည့်ချင်တာလေးက တော့ သတိထားရမဲ့ နေရာမှာ ထွက်လာတဲ့ သတင်းမျိုးစုံ ကို (အဓိက အင်တာနက် သတင်း) ချင့်ချိန်ပြီးမှ ယုံဖို့လိုပါသေးတယ်။
ဒီအချိန်မှာ တစ်ခြား တောကြောင် တွေက လဲ ထ နေတာမို့ ပြောရရင် ရန်သူ က တစ်ဖက်ထဲ မှာတင် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။
ရွာထဲ မှာတော့ အဲလို မဟုတ်တာ တင်လေ ကျွန်မ တို့ အတွက် လေ့ကျင့်ကွင်းဖြစ်လေ ဖြစ်မှာမို့ မဟုတ်တဲ့ ကောလဟာလ တွေ တင်လိုသူများ ကိုယ့်စာရိုက်ရတဲ့ အချိန်ရယ်၊ စာရိုက်လို့ လက်ညောင်းရတာရယ် ဘဲ အဖတ်တင်ပါ့မယ်။
ဒါကြောင့် ဒီမှာလာပြီး အချိန်မဖြုန်း ဘဲ တစ်ခြား ကောလဟာဟ ဖြန့်တဲ့ နေရာ တွေမှာသာ ပူးပေါင်းကြပါ။
ဒီရွာက လူတွေဟာ ပြောတိုင်းယုံတဲ့ ငတုံး တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတာလေး သိဖို့ပါဘဲ။
ရွာ့ လုံခြုံရေး က တော့ မပူပါနဲ့ အစ်မရေ။
သူကြီး က သူ့လူ တွေကို တပ်လှန့်ပြီး ကင်းချ ထားပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။
နောက် သူကြီး က ဒီလို မျိုး မအိပ်နိုင်ဖြစ် ရတာကို အခွင့်ယူပြီး သူ့ဗိုက်ကို ပိန်အောင် ချ နေရတာ အစ်မရဲ့။
သူ့ ဗိုက်မကျမချင်း ကျွန်မတို့ သူကြီး က လူလုံးထွက်မပြဘူး တဲ့လေ။
ဒီတော့ ရှိပါစေ။ ;-)
အဆုံး မှာတော့ အားလုံးအေးချမ်းသွားဖို့ မေတ္တာထား ရင်း ဆုတောင်းကြတာပေါ့။
မယုံကြည်ရင် လဲ အနဲဆုံးတော့ ဆုတောင်းနေချိန်မှာ ကိုယ့်စိတ်လေး အေးချမ်းမှု တော့ ရနိုင်ပါတယ်။
မထင်မှတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု့ဆိုတာလိုတာတော့ အမှန်ပါဘဲ အန်တီရေ..
အခုလည်း မသီတာထွေး ကိစ္စ က ထက်ထက် ထောင်ထဲမှာ ကြိုးဆွဲချ သေသွားတယ်ဆိုတော့ သူ့ဟာသူ တကယ်လုပ်ရင်တောင်မှ ရှင်းရမှာတွေ မနည်း တော့ဘူးထင်ပါတယ်။
ဖြစ်သင့်သည်များကို စနစ်တကျ သုံးသပ် ဝေဖန်ကာ ကောက်ချက်ဆွဲထားတာလို့ မြင်မိပါတယ်။ အမှန်တွေပါပဲ။ ကျွန်တော်စစ်သားမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးလဲ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့အတူ ပေါ်လာတဲ့ တပ်မတော်ကို ဟိုတုန်းက ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ တစ်သားထဲ ဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊ တပ်မတော်နေ့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှာ ဈေးချိုတောင် ပိတ်ခဲ့တာ။ စစ်ကြောင်းတွေ လာတာကို ကြိုကြဖို့။
အခုအခြေအနေမှာ ပြောစရာ ဝေဖန်စရာ မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ ပစ်မယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ ပစ်လို့ ရနေပေမဲ့ လိုအပ်သလောက်ပဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ ယူဆပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တိုင်းပြည်၊ လူမျိုးကို ကာကွာဖို့မှာ တပ်မတော်ဆိုတာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေတာပါပဲ။ မှန်မှန်ကန်ကန် မိမိတာဝန် ကျေပွန်စွာ ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်က စစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ သားပါ။
စစ်တပ်ထဲမှာမွေးပြီး စစ်တပ်ထဲမှာ ကြီးပျင်းလာတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
အရင်တုန်းက စစ်တပ်ကို လူတွေချစ်ကြသလိုမျိုး
စစ်တပ်အပေါ် လူတွေရဲ့ အမြင်မှာ ပုံရိပ်ကောင်းတစ်ခုပြန်ဖြစ်ဖို့
အခု ….. စလို့ ရပါပြီ။
အစ်မ ပို့စ်ထဲက ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စာလေးတွေ ရွေးထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ရွာထဲက ကာလာသားတွေကို ကင်းလှည့်ခိုင်းထားတယ်
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးသို့အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရောက်ရှိနေကြကုန်သော မြန်မာတို့သည်လည်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ၂၄ နာရီပတ်လုံးဆိုသလို သတင်းဖြန့်ချိခြင်း ၊ ပြည်ပသတင်းဌာနများ၏ မဟုတ်မဟတ်ရေးသားမှုများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း ၊ တွေ့လျှင်ချက်ခြင်းပျံ့နှံ့စေကာ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်သူများက အင်္ဂလိပ်လို ၊ တရုတ်စာတတ်သူကတရုတ်လို ၊ ဂျပန်လိုတတ်သူက ဂျပန်လို ကုလားလိုတတ်သူများက ကုလားလို စသည်ဖြင့် ချက်ခြင်းတုန့်ပြန်ကြလေ၏ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တစ်သက်လုံးပဋိပက္ခဖြစ်နေသူများပင်လျှင် ငြိမ်းချမ်းရေးရကုန်၏ ….
ကျနော်တို့ ရွားသူားတွေလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က တာဝန်ကျေကြပါစို့..
ထောက်ခံအားပေးသွားပါတယ်.. ဘရာဗို တီတီပဒုံမာရေ
“အယ်ကိုင်ဒါတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုဟာ အခြေအမြစ်မရှိ ကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ဆိုပေမယ့်
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်စစ် စစ်က အသေခံ ဗုံးခွဲ မလုပ်ပါဘူး ဘာသာရဲ့ အဆုံး အမမှာ
မိမိလက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို နိပ်စက် ညင်းပန်းခြင်း မလုပ်ရလို့ပါ ပါတယ်။မြန်မာပြည် မှာ မြန်မာပြည်ကြီးကို ချစ်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးလို့ ခံယူတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေ များပါတယ်။”
နောက် အယူသီး တွေ ၀င်လာရင်လည်း မြန်မာ မွတ်စလင်က ပူးပေါင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး ဆန့်ကျင်မှာပါ
မိမိတိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ရမယ် …ဆိုတဲ့ ဘာသာရဲ့ ပညတ်ချက်အပေါ်မှာ ကိုယ့်တိုင်းပြည် မြန်မာပြည်ကို ကာကွယ်ရမှာပါ။နောက်တစ်ခုက
ရခိုင်လူမျိုးတွေ ဟာ တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာမွတ်စလင်တွေက နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံ သား မဟုတ်သူတွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်ဖို့ ၊ မိမိ နိုင်ငံသား ချင်းချင်း ကူညီဖို့ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေ မှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ခင်ဗျား။
ရခိုင်အတွက် အလှူ ကို အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ဂေဇက် ရွာသားတွေ က စေတနာရှိစွာ နဲ့ ထည့် ၀င်ကြမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ရို ဟင်ဂျာနဲ့ မြန်မာမွတ်စလင်နဲ့ မည်သို့ မျှ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒေါက်တာပို့စ် အတွက် လေးစား ပါတယ် ဒေါက်တာခင်ဗျား။
အကြံပေးလေး ဘာလေး ပေါ့လေ
ချစ်သော မြန်မာတိင်းရင်းသားတို့သူများပါတဲ့ချီးပုံက အနံ့ ဆိုးကို သွားပြီး ခွမထိုင်မိအောင် သတိဆောင်လော့
သူ့ အီးကို ကိုယ့်အီး မဖြစ်ကြအောင် သတိဆောင်လော့….သတိဆောင်လော့.
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ တော်ကြာ သူချီးကိုယ်ဆေးနေရမယ်လဲစိုးပါတယ်
ခွမထိုင်မိရင်တောင် တက်မနင်းမိဖို့ သတိပြုကြရမှာ
အမယ် ပြောရင်းနဲ့ အနံ့တောင်ရလာပီ ကျေးမှ ….ဖုံးထိုင်း ဖုံးထိုင်း….
ရူးနေတဲ့ခွေးကို မကိုက်အောင် ဘယ်လိုတားပါမလဲ။ သုတ်သင်ရှင်းလင်းပစ်ခြင်းမှတပါး အခြားမရှိပါ။
`စစ်တပ်ဆိုတာ အမှန်တစ်ကယ်သာလိုက်နာနိုင်လျှင် ယောင်္ကျားကောင်း၊ ယောင်္ကျားမြတ်တို့ကို မွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ နေရာပေါ့။´
ကဲ…..စစ်သည်တော်ဟောင်းကြီးရေ…..ခင်ဗျားပြောတာ ဟုတ်၊ မဟုတ် ကျုပ်တို့အားလုံးကြည့်နေတယ်။
လက်ခုပ်၊ လက်ဝါးတီးပြီးတော့ လက်မထောင်ပေးဖို့ ၀န်မလေးသလို၊
ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချပြီး လက်ညှိုးထိုးဖို့လည်း ၀န်မလေးဘူး။
ရန်ကုန်တိုင်းမှူးဦးဝင်းနိုင် ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရန် မောင်တောသို့ မနေ့မနက်စောစောထွက်ခွာ
ကျွန်တော် ပို.စ်တင်ခွင်.မရသေးတော. ဟိုဘက်ပို.စ် မှာပြောခဲ.သေးတယ် ။
အဓိက ကတော. စိတ်မကောင်းဘူးတွေဘာတွေ ညာတွေ ပြောနေမဲ.အစား စိတ်ကောင်း
သွားအောင် ၀ိုင်းဝန်းပံ.ပိုးစေချင်တာ ။
နောက်နောင် နယ်မြေကာကွယ်ရေးအတွက်ပါစဉ်းစားရပါတော.မယ် ။
နယ်ခြားစောင်.တပ်လိုဟာမျိုးပေါ. ။ နောက်နောင်လည်း ကျွန်တော်တို.တွေ လူစုလူဝေး
များတဲ.နေရာတွေမှာ သတိထားသွားလာသင်.တယ် ။ အသက်ညဏ်စောင်.ဆိုပါတော.ဗျာ ။